Fadeexad: Muuse Biixi oo diidey inuu la hadlo saxaafada shalay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Fadeexad: Muuse Biixi oo diidey inuu la hadlo saxaafada shalay
Shalay ahayd markii Muuse Biixi ka soo laabtey Imaaraadka oo ay wadey isla diyaaradii ka qaadey Hargeysa. Waxa fashil foolxun ka soo raacay safarkii uu ku tagey Imaaraadka oo dadka qaarkii sheegeen in loo sharaxay keliya dadaalo uu wado raiisal wasaare Cabi Axmed.
Hadaba fadeexada ugu weyn ee shalay dhacdey ayaa ahayd in Muuse Biixi diidey inuu la hadlo saxaafada magaalada Hargeysa oo ku tilmaama madaxweynaha qaranka, Waxa nalagu xereeyay qol kadibna waxa Muuse Biixi laga saaray qolkale oo isaga kaligii shir jaraaid ku qabtey.
Waxa iyaga la Hadley wiil dhalinyara oo afhayeen u ah Muuse Biixi oo ka aradan saxaafada iyo hab maamuuska masuuliyada loo dhiibey wuxuu isla isaguna diidey in su’aalo la weydiiyo.
”Siilaanyo garanayn oo waabu xanuusanaa laakiin Muuse Biixi waxa noo soo baxdey inuu shaahiisa soo qaatey kadibna diidey inuu la hadlo si ayna sir uga fakan ayuu yiri C/llaahi muuse oo jooga Hargeysa.
Isku soo duubaa marka fashil yimaado ayaa keenta in laga carrao saxaafada siiba tan Hargeysa oo lagu yaqaano inay amaanaan kuna sheegeen mujaahid ileyn waa isla hal jufee.